1. သင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ ပိရမစ်ပုံက သင့်ကို အုံ့ပုန်းလား၊ ပွင့်လင်းသူလား ခွဲခြားပေးနိုင်
2. သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့အတွက် ၇ရက်သားသမီး ဗေဒင်
3. သြဂုတ်လ ၁၃ရက်နေ့အတွက် ရာသီခွင်အလိုက်ဗေဒင်ဟောစာတမ်း
1. ဓာတ်ပုံများပေါက်ကြားပြီးနောက် G-Dragon မှာ ဂျပန်မင်းသမီးနှင့်တွဲနေသည်ဟူသော ကောလဟာလများ ထွက်ပေါ်
2. (LEAD) Seoul မြို့၊ Gangnam မှာရှိတဲ့ လူမှုဖူလုံရေးစင်တာမှာ စစ်မှုထမ်းတာဝန် စတင်ထမ်းဆောင်နေပြီ ဖြစ်တဲ့ မင်းသား Lee Min-ho
3. အယ်လ်ဘမ်အသစ်နဲ့အတူ “ခုနှစ် နှစ်ဆိုတဲ့ အကျပ်အတည်းကာလ” ကို ဖြတ်ကျော်လာခဲ့တဲ့ Nine Muses
1. ယနေ့ခတ် အချစ်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် - 1
2. ပိတောက်ပင်ကို အိပ်မက်မက်တဲ့ ကောင်လေး - Chapter 1
3. အိမ်နံပါတ် ၁၇ - အစ/အဆုံး
ကုမ္ပဏီ : HTUT Media
Mobile phone အသုံးပြုကြသော မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားများအနေဖြင့် မိမိတို့ ရောက်လေရာတွင် မိမိတို့ နှစ်သက်သော ဘောလုံး အကြောင်း သတင်းများကို အလွယ်တကူ သိရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ BalloneStar တွင် ပွဲစဉ် ဇယားများ၊ ပွဲစဉ် ရလဒ်များ၊ ပွဲပြီး သတင်းများ၊ ပွဲပြီး သုံးသပ်ချက်များ၊ ပွဲကြို ခန့်မှန်းချက်များ၊ ပြိုင်ပွဲ တစ်ခု၏ အကောင်းဆုံးအမှန်ဆုံး ၃ပွဲ ခန့်မှန်းချက်များ၊ အသင်းတိုင်း ၏ ခန့်မှန်းကစားကွက်၊ လူစာရင်းများ၊ ဒဏ်ရာရ၊ ပွဲပယ် ခံရသူများအကြောင်း၊ စသည်တို့ကို စုံလင် ပြည့်စုံစွာ ထည့်သွင်း ဖော်ပြပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
တိုက်ရိုက်လင့် - http://bit.ly/2lp8qlr
◄ HTUT Media သတင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေး ဝန်ဆောင်မှုများ